wasm3, onye ntụgharị okwu WebAssembly wepụtara nsụgharị mbụ ya | Site na Linux
wasm3, onye ntụgharị okwu WebAssembly weputara udi nke mbu
Na nso nso a, e weputara nsụgharị mbụ nke wasm3, nke bu onye ntụgharị okwu dị nnọọ ngwa ngwa nke koodu etiti site na WebAss AssemblyDika edeputara ya bu nke bu ngwa ngwa WebAssembly na microcontrollers na nyiwe nke enweghi mmejuputa JIT maka WebAssembly, enweghi ebe nchekwa zuru oke maka JIT iji rụọ ọrụ, ma obu mepụta peeji ebe nchekwa achọrọ maka JIT Mmejuputa.
Maka ndị na-amaghị WebAss Assembly, ị kwesịrị ịma na nke a bụ asụsụ dị ala, emebere ya ka ọ bụrụ usoro ebumnuche mgbe ọ na-achịkọta site na C na C ++, ọ bụ ezie na ọ na-akwado koodu ntinye maka asụsụ ndị ọzọ, dị ka Rust na Go. A na-eji usoro koodu ọnụọgụ abụọ a na-ebugharị iji mezuo ederede site na ihe nchọgharị ndị ahịa.
1 Banyere wasm3
1.1 Gbalịa wasm3
Wasm3 gafere ule ndakọrịta na WebAssembly 1.0 nkọwapụta na enwere ike iji ya mee ọtụtụ ngwa WASI, na-enye naanị oge 4-5 dị obere karịa arụmọrụ JIT na oge 11.5 dị ala karịa mkpokọta koodu obodo.
Tụnyere ndị ọzọ ngosi site na WebAss Assembly (wac, ndụ, wasm-micro-runtime), wasm3 bụ 15.8 ugboro ngwa ngwa.
Wasm3 malitere dị ka ọrụ nyocha ma na-aga n'ihu n'ụzọ ọ bụla. Nyocha nke moto na gburugburu dị iche iche bụ akụkụ nke nyocha ahụ. Ebe ọ bụ na anyị nwere Lua, JS, Python, Lisp, (…) na-agba ọsọ na MCU, WebAss Assembly bụ n'ezie ụzọ kwere nkwa. Ọ na-enye gburugburu ebe dịpụrụ adịpụ, nke akọwapụtara nke ọma na nke a na-ahụ anya. N'etiti usoro eji eme ihe, anyị nwere ike depụta ngụkọta ngụkọta oge, edemede, iwu IoT, nkwekọrịta ngọngọ, wdg.
Nkeji 3 chọrọ 64Kb ebe nchekwa maka koodu yana 10Kb nke Ram, ihe ị enye ohere iji oru ngo iji gbaa ngwa achikota na WebAssembly na microcontrollers dị ka Arduino MKR *, Arduino N'ihi, Ngwurugwu Photon, ESP8266, ESP32, Air602 (W600), nRF52, nRF51 Blue Pill (STM32F103C8T6), MXChip AZ3166 (EMW3166), Maix (K210), HiFive1 (E310), tinyekwara na bọọdụ na kọmputa ndị dabeere na ụkpụrụ ụlọ x86, x64, ogwe aka, MIPS, RISC-V, na Xtens.
A na-arụ ọrụ dị elu site na iji usoro Massey Meta Machine (M3) na onye ntụgharị okwu, nke iji belata mpempe akwụkwọ ndozi koodu bytecode, bytecode na-atụgharị asụsụ na-arụ ọrụ nke ọma na arụmọrụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ nke na-emepụta koodu igwe-na ihe eji egbu egbu nke igwe akụrụngwa akụrụngwa na-aghọ ndekọ aha dị mma karị maka arụmọrụ na M3 bụ ọrụ C, onye arụmụka ya bụ ndekọ nke igwe arụmọrụ, nke enwere ike igosipụta na CPU na-edebanye aha.
Ugboro oge na-arụ ọrụ iji rụọ ọrụ na-arụ ọrụ nchịkọta.
Ọzọkwa, Enwere ike ịhụ nsonaazụ nke ọmụmụ ahụ na WebAss Assembly na Weebụ, mgbe ha nyochachara puku 948 puku saịtị kachasị ewu ewu nke Alexa gosipụtara, ndị nchọpụta ahụ chọpụtara na Ejiri saịtị 1639 (0.17%) jiri WebAss Assembly, nke ahụ bụ 1 na saịtị 600.
Na mkpokọta, weebụsaịtị ahụ gosipụtara ibu nke modulu WebAssembly nke 1950, nke 150 bụ ndị pụrụ iche.
Mgbe ị na-atụle oke nke WebAss Assembly, e mezuru nkwubi okwu na-akụda mmụọ: n'ihe karịrị 50% nke ikpe ahụ, ejiri WebAss Assembly mee ihe maka ebumnuche ọjọọ, dịka ọmụmaatụ, iji kpụọ cryptocurrencies (55,7%) na iji zoo koodu site na edemede ọjọọ (0,2, XNUMX%) ).
Nke sistemụ arụmọrụ akwado maka Wasm3, anyị nwere ike ịchọta Linux tinyere ndị na-eme ihe nkiri OpenWRT, Windows, macOS, gam akporo na iOS. O nwekwara ike ikpokọta wasm3 n'ime koodu WebAssembly nke ime ka onye ntụgharị okwu wee nwee ihe nchọgharị ma ọ bụ iji nweta onwe ya.
Maka ndị nwere mmasị inwe ike iji onye ntụgharị okwu a na usoro ha, nwere ike nyochaa akwụkwọ yana koodu oru ngo nke edere na C ma kesaa n'okpuru ikike MIT, Na njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » wasm3, onye ntụgharị okwu WebAssembly weputara udi nke mbu
Mozilla na-ahazigharị ma na-ahapụ ndị ọrụ ya 70 ozugbo ahụ